Guyyaan Walabummaa Ameerikaa Har’a Kabajamee Oole
Adoolessa 04, 2017
Lammiiwwan Ameerikaa har’a jechuun Adoolessa 4 guyyaa Briteen jalaa itti walabooman kabajanii oolu.
Uummanni miliyoonaan laka’amu waggaa 241ffaa Ameerikaan walabumaa itti gonfatte agarssiisa xaaxee qabsiisuu, sirboota adda addaa, nyaata alatti bilcheessanii waliin qooddachuuf taphoota adda addaan kabajaju.
Jaarmoliin naga eegumsaas ayyaanni kun nagaan akkakaajamu gochuuf bifa haaraan qindaa’anii jiran.
Kutaa Kaaba gama kaabaa magaalaa Boston, Massachuseets bakka waraanni warraaqsaa Ameerikaa itti jalqabe keesatti poolisiin xayyaara nam maleeyyii yeroo bobbaasuu dhaan bakka uummati kummi 500 ta’u wal ga’uu xaaxee qabsiistu samii irraa suraa kaasuuf jiru.
Magaalaaleen kan akka NY fi Washingtion illee guyyaa walabummaa kun nagaan akka kabajamu qoophee barbaachisu xumuraniru. prezidaant Donald Trump ayyaana kana maatiiwwan miseensota waraanaa waliin nyaata alatti bilcheessan qooddachuun yoo ta’u booda irra hojjttoota White House fi maatiiwwan kana waliin xaaxee qabsiisamu daawwatuuf jiru.
Gumiin Komiishina Gamtaa Afriikaa Har’a Xumurame
Hoogganoonni Komiishina Gamtaa Afriikaa Gumii Isaanii 29ffaa Jalqaban
Chaayinaan 'Dooniin Humna Galaanaa Yunaayitid Isteets USS Sethem Jedhamu Daangaa Cabse' Jechuun Balaaleffatte
Walga'iin G-20 Jalqabuun Dura Prezdaant Traamp Hoggantoota Awroophaa Wajjin Dubbachuu Isaanii Beeksisan
Prezidaant Traamp Sagantaa Niyuukilaraa Kooriyaa Kaabaa Ilaalchisuun Hoggantoota Chaayinaa fi Jaapaan Hasofsiisan
Yunaayitid Isteets Somaaliya Keessatti Haleellaa Al-Shabaab Irratti Xiyyeeffate Geggeessite